Filtrer les éléments par date : dimanche, 12 décembre 2021
dimanche, 12 décembre 2021 19:56
Moramanga : Mpiasan'ny Jirama mivarotra herinaratra amin'ny manodidina, saika namono ankizy
Mpiasan'ny Jirama ao amin'ny Fokontany Ambodiakondro, section Andrefana, Kaominina ambonivohitry Moramanga, no mizara sy mivarotra herinaratra amin'ny trano 30 tafo manodidina azy eo.
30 000ar isan-tokatrano no aloa amin'izany isam-bolana na firy no lany na firy. Milevina ilany ambanin'ny tany ireo fil mitondra herinaratra, ka zaza milalao teny an-tokotany no napitiky ny herinaratra, may ary saika namoy ny ainy.
Rehefa nanontanian'ny manodidina ity mpiasan'ny Jirama ity, dia nolazainy fa zony sy afaka manao izany izy, ary nanambara fa manana taratasy ara-dalàna ahafahany mizara sy mivarotra herinaratra.
Tsy mino izany moa ny manodidina ka niresaka taminy mba ampihato izany, fa vava sy ompa ary fampitahorana indray no nasetriny izay miteny azy.
Efa nametraka fitarainana eny anivon'ny Jirama moa ny manodidina amin'izao halatra sy loza mety aterak'izao herinaratra milevina anaty tany tsy manaraka ny fenitra izao.
dimanche, 12 décembre 2021 19:41
Toliara : Naparitaka tamin'ny lakrimôzena ireo saika hiara-hankalaza aniversera tamin'i Marc Ravalomanana
Feno 72 taona androany 12 desambra 2021 Atoa Marc Ravalomanana, filoha nasionalin'ny antoko Tiako i Madagasikara, sady filoham-pirenena teo aloha.
dimanche, 12 décembre 2021 19:36
Antsirabe : Nikatona noho ny Covid ny kolejy Saint Joseph
Nikatona nanomboka ny atoandron'ny alakamisy 9 desambra 2021 ny kolejy Saint Joseph Antsirabe noho ny fihanaky ny aretina Covid-19.
Tsy miverina ny mpianatra raha tsy ny 4 janoary 2022, raha toa ka tsy misy didy hafa avy amin'ny faritra.
dimanche, 12 décembre 2021 18:39
Covid-19 : 08 no maty ny herinandro teo
Teo anelanelan'ny 04-10 désambra 2021 dia tsy nitsaha-niakatra ny isan'ireo voan'ny aretina Covid-19, ka nahitana tranga vaovao 994, ary ny 48 tamin'izany dia nahitana fahasarotana, cas grave, 274 kosa no sitrana tamin'ireo 7 828 nanaovana fitiliana.
08 kosa no namoy ny ainy tamin'iny herinandro ambony iny, raha tsy nisy maty tamin'ny tapa-bolana lasa.
dimanche, 12 décembre 2021 18:33
Fampiasana ny “Augure” : Very vola 116 000 000 000 Ariary ny Fanjakana
Volam-panjakana mitentina 116 000 000 000 Ariary no very noho ny fampiasana ny rindrambaiko “Augure” tamin’ny fitantanana ny mpiasam-panjakana. Tsikaritra io nandritra ny fitsirihana nataon’ny Fitsarana misahana ny Kaonty nandritra ity taona 2021 ity.
Ny Fitsarana misahana ny Kaonty moa dia mitsara ny kaontin’ny kitapom-bolam-panjakana, manara-maso ny fanatanterahana ny Lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana sy ny tetibolan’ny antokon-draharaha miankina amin’ny Fanjakana, manara-maso ny kaonty sy ny fitantanana ny orinasam-panjakana, mitsara ny fampakarana ambony natao tamin’ireo didi-pitsarana navoakan’ny Fitsarana ara-bola, manampy ny Antenimiera sy ny Governemanta eo amin’ny fanatanterahana ny Lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana.
Nanatanteraka ampahibemaso ny tatitry ny fitsirahana nataony nandritra ny taona 2021, tetsy amin’ny Fitsarana Tampony Anosy ny Zoma 10 Desambra 2021, ny Fitsarana momba ny kaonty.
dimanche, 12 décembre 2021 18:22
Lalana Soanierana Ivongo - Mananara Avaratra : Hatao tara
Natomboka amin'ny fomba ofisialy ny zoma 10 desambra ny asa fanajariana sy fanaovana tara ny lalana mampitohy an'i Soanierana Ivongo sy Mananara Avaratra.
Mizara roa ny tetikasa, ka ny tapany voalohany mirefy 75km avy eo Soanierana Ivongo hatrany Ivahibe, ny tapany faharoa kosa mirefy 40km mandra-pahatonga any Mananara Avaratra.
Ahitana fanamboarana tetezana lehibe miisa 10, ka anisan'izany ny tetezana ao Soanierana Ivongo izay mirefy 320m.
Ho vitaina anatin'ny 18 volana ny asa hatao, ary manaraka ny fenitra.
dimanche, 12 décembre 2021 18:17
Faritra atsimon'i Madagasikara : Hanome 25 tapitrisa dolara ny Amerikana ho fanampiana vonjy taitra
Nambaran’ny Mpiandraiki-draharaha ao amin’ny masoivohon’i Etazonia, Amy Hyatt, ny famatsiam-bola 25 tapitrisa dolara fanampiny, ho fanampiana vonjy taitra hanalefahana ny vanim-potoana manahirana any amin’ny faritra atsimon’i Madagasikara.
Izao famatsiam-bola izao dia atao amin'ny alàlan'ny Sampandraharaha Amerikana misahana ny Fampandrosoana Maneran-tany (USAID), amin'ny anaran'ny Vahoaka amerikana, hamatsiana tetikasa efatra ho fanohanana ny fanarenana ny fambolena sy hanomezana sakafo ny vahoaka any atsimon’i Madagasikara.
Tombanana ho 1,3 tapitrisa ny olona any amin'iny faritra iny no ianjadian’ny tsy fanjarian-tsakafo. Vao manomboka mantsy ny vanim-potoanan'ny maitso ahitra, ary ahiana ho voafetra ny fahazoana sakafo hatramin'ny volana aprily 2022.
dimanche, 12 décembre 2021 18:15
Andro iraisam-pirenena ho an’ny Zon’olombelona : Miaramila mitam-basy no teny amin’ny 13 Mai
Araka ny tati-baovaon’ny seraseram-panjakana La Dépêche Informative Taratra dia « miatrana eny amin'ny Kianjan'ny 13 may sy ny manodidina ny mpitandro filaminana, maro be ».
Izay no nanamarika ny zoma 10 desambra, izay Andro iraisam-pirenena ho an’ny Zon’olombelona ity.